Blog-Kubvarura: Netglobalbooks | Martech Zone
China, July 19, 2007 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Tevere kumusoro pane iyo blog-yekumisikidza runyorwa ndiLinda Lee uye iyo Netglobalbooks blog. Linda muzvinabhizimusi uye amai vasina murume vane vana vatatu vakura. Linda akatanga kutengesa mabhuku nematoyi uye matikiti emakonzati pa eBay, uye izvi zvinotungamira mukunyora nekutengesa ebook nekugadzira mawebhusaiti.
Blog yaLinda yakanaka - iine Paintbrush theme naAntbag.
Heano mazano ako eBlog, Linda:
Ndingakurudzira kukwidziridza yako vhezheni ye WordPress kune yazvino uye yakakura vhezheni.
Ndakawana mashoma oddities netemusoro wako. Pa peji rako guru renongedzo, yako post inotanga ne> p /> uye panoratidzika kunge paine mamwe emafonti emategi anozvidzokorora ivo mushure mezvinyorwa zvese.
Iwe unofanirwa kukwanisa kuwana iyo yakashata font tag nekugadzirisa yako huru index peji mune yeWordPress theme edita. Iyo inonakidza p tag inogona kunge iri mune zvemukati.
Iwe une chinongedzo chakafa kune foramu mune yako blogroll mune yako yepadivi bar. Kana iwe uchida foramu inoshanda muWordPress, unogona kuyedza bbPress. Shamwari yangu yeku blogga Tony Chung ine iyo yakatakura uye inomhanya mushe saiti yake, Geekwhat.
Ini ndinoona kana iwe uchinyora kuti iwe une musanganiswa wemavara tags (> p>) uye mitsara kutyora (> br />). Mutsetse wedambura unotyora mutsetse uye woenderera iwe pamutsara unotevera usina padding kana margin. Ndima; zvisinei, inosiya imwe Nice padding pamusoro uye pazasi kwendima yako yezvinyorwa. Ndima dzinoputsa zvirimo zvakanaka - zvichiita kuti zvemukati zvive nyore kuverenga. Ini ndaizodzivirira kutyorwa kwemutsetse.
Iko hakuna meta dhata tag mune yako musoro. Meta dhata inoshandiswa neinjini dzekutsvaga kuratidza kiyi uye ruzivo rwekutsanangudza nezve yako saiti uye yega peji rako. Ndinokurudzira kurodha kumusoro kwemamwe plugins kuti ikubatsire iwe nekumisikidza ako akakosha uye tsananguro meta tag!
Yako RSS feed icon yakamisikidzwa zvakanaka! Kuti uve nechokwadi chekuti uri kukwezva kuverengera neRSS feed yako, ini ndinokurudzira kusaina Feedpress uye kurodha kumusoro iyo Feedburner WordPress plugin.
Kubatsira Injini dzekutsvaga mukufambisa blog yako zviri nyore, ini ndingakurudzira zvikuru kurodha kumusoro Sitemap jenareta plugin. Changu chandinonyanya kufarira beta vhezheni - inomhanya chaizvo uye ini handina kumbobvira ndaita dambudziko. Sezvo yako blog iri mune subdirectory, paunovaka yako mepu ive shuwa yekugadzirisa yako robots.txt faira nenzvimbo yekuiwana iko:
Kana ukapinda mumatambudziko, saina na Google Search Console kuwana mamwe matipi!
Linda Lee ndiani? Mufananidzo uripi? Aripi mapikicha? Kugovera mablogiki kwakanyanya sechiitiko chekuona sekuverenga imwe. Vanhu vanowanzo batanidza zvakanaka kuvanhu, kwete mameseji. Handina pikicha pamusoro wangu nekuti ndiri narcissist… ndinayo ipapo kuti ugone kurangarira kumeso kwangu uye pamwe undivimbe zvishoma.
Ini ndaizosasa zvako zvawatumira ne clipart kana mifananidzo yekuzvitsauranisa kubva kune mamwe mablog uye nekupa imwezve nzwisiso kune zvako zvemukati Shandisa mabara nemusoro (h2, h3) mukati mezvako zvemukati kuti vaverengi vagone kuitora zviri nyore.
Linda, urikuita rakanakisa basa neakadai blog diki. Iwe haufanire kukanda zvese izvi zvekuvandudza pairi usiku - tora nguva yako. Zvinotaridza kuti urikunakidzwa nekunyora kwako uye zvine hunhu uye zvine ruzivo. Chengeta icho kumusoro uye wedzera akati wandei eaya tweaks nekufamba kwenguva - iwe unowana chinowedzerwa mukuverenga uye mune yekutsvaga injini kuwanikwa.
Rombo rakanaka! (Kubva kuna Baba Mumwechete!)
Tags: blog tippingblog matipilindanetblobalbook
Jul 19, 2007 na10: 35 PM
wow doug, ini ndaodhaunirodha iyo sitemap jenareta plugin uye inotyisa, ini ndatotumira iyo sitemap kugoogle, zvinoita kunge iri kushanda zvakanyatsonaka saka thanx zvakare kune ako mazano ... zvakare ndiri kuita shanduko kune rangu rekutanga peji, mushure mekuverenga pane ako ekupedzisira blog tippings, ndinofunga ndiri kuita zvirinani 🙂
Jul 19, 2007 na11: 16 PM
bbpress matombo! Ndatenda nekutaura Doug!
Jul 20, 2007 na7: 00 PM
Wow ndinokutendai nerubatsiro rwese uye nekubatana kukuru uye nemazano.
Ini ndashanda pane mamwe nhasi uye Im ndiri kushanda pikicha, uye ini ndakagadzirisa yangu nezve peji.
Ini ndichave ndichiisa iwo plugins awakaraira uye ini ndakaita blog yekupinda pamusoro pako!
Iwe uripowo pane yangu blog roll ikozvino.
Kutenda zvakare nezvese!
Jul 21, 2007 na2: 09 PM
Unogamuchirwa kwazvo Linda! Ndatenda zvikuru nekundiwedzera kune iyo blogroll - ndiko kurumbidzwa kukuru !!!
Jul 26, 2007 na2: 46 PM
Ini ndangotenga bhuku zvichibva pane zvaunotora.
Ini ndakanga ndisati ndambonzwa nezvemurume uyu uye ndakaverenga maAmazon ongororo uye urwu ndirwo rudzi rwangu rwebhuku. "Tarisira zvisingatarisirwi"
(Ndakaenda kuBay ndikatenga, ndine hurombo nezve izvo) asi ini ndakazviisa pawebhusaiti yangu zvakare kutengeswa kuburikidza neAmazon.
Sep 28, 2007 na3: 55 PM
Roger ane rake own blog, zvakare! Iye murume anonakidza chaizvo. Ini ndinoda iro chairo bhuku, zvakadaro!